Football Khabar » रोनाल्डो र मेस्सीभन्दा एमबाप्पेको चाँडो १०० गोल !
रोनाल्डो र मेस्सीभन्दा एमबाप्पेको चाँडो १०० गोल !
फ्रान्सको राष्ट्रिय टोली तथा पिएसजीका युवा फरवार्ड केलियन एमबाप्पेले करिअरको १०० गोल पूरा गरेका छन् । युरो कप छनौटअन्तर्गत गत राति भएको एन्डोराविरुद्ध ४–० को जित निकाल्नेक्रममा १ गोल गरेका उनले देश र क्लबबाट गरी करिअरको १०० गोल पूरा गरेका हुन् ।
२० वर्षीय एमबापप्ले क्लब र देशका लागि गरी कूल १०० गोल गर्दा क्लबको सिनियर टोलीबाट कूल ८७ गोल गरेका छन् । उनले मोनाको र पिएसजीबाट गरी ८७ गोल गरेका हुन् । त्यसैगरी, उनले फ्रान्सको टोलीबाट कूल १३ गोल गरेका छन् । एमबाप्पेले कूल १८० खेलबाट १०० गोल गरेका हुन् ।
रोनाल्डो र मेस्सीभन्दा चाँडो !
यससँगै एमबाप्पेले अर्जेन्टिनाका लिओनल मेस्सी र पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोभन्दा पनि चाँडो करिअरको १०० गोल पूरा गरेका छन् । एमबाप्पेले २० वर्ष १७३ दिनका दिन करिअरको १०० गोल पूरा गरेका हुन् ।
यता, रोनाल्डोले भने २२ वर्ष ३५६ दिनका दिन देश र क्लबाट गरी करिअरको १०० गोल पूरा गरेका थिए ।
त्यसैगरी, मेस्सीले आफू २२ वर्ष ९७ दिन पुगेका दिन देश र क्लबबाट गरी करिअरको १०० गोल पूरा गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति २९ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०५:३०